ဂျူနီယာဝင်း – ဘဘကြီးဦးခင်မောင်လတ် နှစ်တစ်ရာပြည့်သို့ | MoeMaKa Burmese News & Media
(မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၁၅
(အတွေးအမြင်ဆောင်းပါး “ဘဘကြီးကိုလွမ်းပါသည်“ ။ Junior Win’s ‘Walking Through The Wonderland’ မှ A Letter to My Grandfather’ နှင့် “How Lucky We Are“ နှင့် တုို့အား ဖြည့်စွက်ကာ ဦးခင်မောင်လတ်၏ သြဂုတ်လ ၂၄ တွင်ကျရောက်မည့် နှစ်တစ်ရာပြည့် အတွက် အမှတ်တရ အဖြစ် ကိုယ်တိုင် ဘာသာပြန်ထားသည်။)
သြဂုတ်လမှာ နှစ်တစ်ရာပြည့်မယ့် ဘဘကြီး ဦးခင်မောင်လတ်ကုို အမှတ်တရ ရည်ရွယ်ရင်းက ဘဘကြီးအမြဲတန်း ပြောနေကြစကားတွေကို ကြားယောင်နေရင်း သည်စာကိုေ၇းဖြစ်သွားပါသည်။ “မင်းတို့တွေ ကံကောင်းလိုက်ကြတာ“ တဲ့။ ဘဘကြီးက ပစ္စည်းအသစ်အဆန်းတွေ တွေ့ရတိုင်း ပြောနေကြစကားပေ့ါ။ ဥပမာ ကက်ဆက် အသစ်တစ်လုံးရရင်၊ ကင်မရာအသစ် ကိုင်ရရင်၊ ကွန်ပြူတာတွေ ပေါ်လာတဲ့အခါ၊ တယ်လီဗီးရှင်း ကြည့်ရရင်၊ အောက်စက်တွေ ပေါ်လာတော့၊ သည်လိုကြားရတိုင်း ဟုတ်မှာပဲလို့ တွေးမိပါရဲ့။ ဘဘကြီးတို့ မကိုင်ဖူး မသုံးဖူးတာတွေ သုံးရကိုင်ရတိုင်း ဘဘကြီးဆီက သည်စကား ကြားရလွန်းလို့ ရိုးတောင်သွားပါသည်။
“ငါတို့ ကံကောင်းလှခြေလား” လို့ ဟမ်းဖုန်းအသစ်တစ်လုံးကုိုင်ရတော့၊ လက်တော့ သုံးရတော့၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကင်မရာကုိုင်မိတော့ ဘဘကြီးကို လွမ်းရင်းက ဘဘကြီးအသံကြားမိတာ အံ့သြစရာမဟုတ်ဖူးပေါ့။ အခုဆုို တီဗီ လိုိုင်းတွေက မရေတွက်နုိုင်အောင်ရှိလာတော့ ဘဘကြီးရေ…. အခုသည်လောက သည်ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသစ်အဆန်းတွေက တနေ့ထက်တနေ့ မရိုးအောင် ပေါ်လာနေတာကတမျိူး၊ သည်တော့ ဘဘကြီးကိုလဲ အသည်အခါတိုင်း သတိရမိနေတော့ တနေ့မှ မမေ့ဖူးလို့ ဆိုရင် ဘဘကြီးက ပြုံးနေဦးမလား။
ကွန်ပြူတာ လက်တော့ နဲ့စာတွေရိုက်ရင်း စာတွေမှားဖျက် မှားဖြူတ်၊ စာတွေ အလိုလိုပျောက်တာတွေ စိုးရိမ်စရာတွေ များလွန်းလို့ အပိုပစ္စည်းတွေ ဥပမာ စတစ်တို့ဘာတို့ပေါ့လေ…. ဘဘကြီးက ဒီစကားလုံးတွေ ကြားရင် ဘာတွေလဲ သိမှာမဟုတ်တာ။ သူတို့ကို သိမ်းဆည်းထားသို….. ထားပါတော့ ဘဘကြီးရယ်…. ဆိုလိုတာကတော့ အရင်တုန်းက စာရွက်နဲ့ ဘောပင်နဲ့ အကြမ်းရေး၊ ပြိးရင် ဖိုင်ထဲထည့်သိမ်း၊ စာမူကို အသစ်ပြန်ကူး စီစစ်၊ မဂ္ဂဇင်းတိုက်ကိုပို့၊ စိတ်မချရင် မိတ္တူကူးထား (photocopy စက်တောင်မှ ဘဘကြီးတုို့ မှီယုံလေး ထင်တယ်) …. အဲသည်အဆင့်တွေမပါတော့ပဲ စာမူကို တိုက်(Type)ရိုက်ပြီး ကွန်ပြူတာထဲ သိမ်းတဲ့သဘေါပေါ့လေ။ ဒါမှမဟုတ်လဲ လက်ရေးနဲ့ ရေးထားတာကုို စကင်ဖတ်ပြီးသိမ်း (စကင်ဆုိုတဲ့စက် ဘဘကြီးလဲသိမှာမဟုတ်)၊ ဒါမှမဟုတ် ဓါတ်ပုံရုိုက်ထား…. ဒီလိုနဲ့ ကွန်ပြူတာက အသိမ်းအဆည်းမကောင်းရင်၊ ကိုယ့်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပျက်သွားရင်တော့ ကိုယ်ရေးထားတာမှန်သမျှ အကုန်ပျက်ဆီးကုန်တဲ့ အဖြစ်တွေကို စိုးရိမ်သောကတွေနဲ့ တနေ့ထက်တနေ့ သည်လိုနဲ့ ကုန်လွန်ပေါ့။
ဘဘကြီးက မင်းတို့တွေက ကံကောင်းလိုက်တာကွာ၊ ဘဘကြီးတုို့ မမြင်ဖူး မကိုင်ဖူးတာတွေ သုံးဖူးကြသကုိုး ဆိုတဲ့စကား ကြားမိပြန်တော့ အဲသည်လို စိုးရိမ်သောကကြားထဲမှာ ကံကောင်း လိုက်တာဆိုတဲ့ စကား ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့ စောဒကတက်ချင်လိုက်တာ။ ဘဘကြီးတို့ခေတ်မှာ အဲသည်လို စိုးရိမ်သောကတွေနဲ့ နေခဲ့ဖူးလို့လားနော်။ တနေ့ထက်တနေ့ ကိုယ်ရေးထာတာတွေ၊ ကိုယ်သိမ်းဆည်းထားတာတွေ၊ ပျောက်သွားမှာစိုးရတာနဲ့၊ စိတ်တပူပူနဲ့ တခါတလေ ညအိပ်ရင်းကသတိရပြီး ထပြီး မီးဖွင့် ကွန်ပြူတာထဲက မသိမ်းမိတာတွေကို ကောက်သိမ်း၊ စတစ်ပျက်သွားရင်ဆိုတဲ့ စိတ်ကပေါ်လာရင် စီဒီထဲကူးနဲ့ ပြီးမှ ပြန်အိပ်ရတဲ့နေ့တွေ ကိုကျော်ဖြတ်နေရတာ။ သည်လိုနဲ့ တခါတခါ အဟောင်းနဲ့ အသစ် မှားမှားဖျက်မိလို့ ဒုက္ခတွေ့ရတာ ခနခန။ တနေ့ကပဲ လက်တော့ ကရုတ်တရက်ကောက်ပျက်သွားတော့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ထထကောက်သိမ်းသိမ်းတတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် ၉၀ ရာခိုင်နှူန်းလောက် သိမ်းပြီးတာ ကျန်ရစ်ခဲ့တာပေါ့လေ။
ဘဘကြီးမေမေကြီးတို့ နှစ်တစ်ရာပြည့်ပွဲကို မေလမှာ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တော့ ဘဘကြီး မေမေကြီးတို့ အရိပ်အငွေ့တွေ ရှိနေတဲ့သည်ခြံထဲ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘဘကြီးလမ်းလျောက်ရင်း ပရိတ်ရွတ်တဲ့ နေရာမှာပေါ့။ မေမေကြီးနဲ့ ဘဘကြီးတို့ရဲ့ အငွေ့အသက်တွေ ရှိတဲ့ ဟောသည်ခြံသည်ဝင်းထဲမှာပေါ့။ ဘဘကြီးတို့ကို ချစ်ခင်သူများ၊ သံယောဇဉ်ရှိသူများ၊ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၅မှာ နှစ်တစ်ရာပြည့်သူများဖြစ်ကြတဲ့ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း၊ ဘဘကြီးဦးခင်မောင်လတ်နဲ့ မေမေကြီးဒေါ်ခင်မျိူးချစ်၊ လူထုဒေါ်အမာတို့အပြင် ၂၀၁၆ ဖေဖော်ဝါရီမှာ နှစ်တစ်ရာပြည့်မယ့် ဗိုအောင်ကျော်ကိုလဲ ထည့်သွင်း ပြီးအမှတ်တရ ကျင်းပဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။ မေမေကြီးနဲ့ ခင်မင်ခဲ့သူ၊ စာပေဗိမာန်မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာမကြီး ဒေါ်ရီကြိန်ကတော့ ၂၀၁၅ ဇန်န၀ါရီမှာ နှစ်တစ်ရာပြည့်ခဲ့ ပေမယ့်လဲ သတိရမိတာပဲရှိပြီး ထည့်သွင်းမဖော်ပြ ဖြစ်ခဲ့တာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ သို့သော်လဲ မေလတုန်းက နှစ်တစ်ရာအမှတ်တရ ဟာဖြင့် အောင်အောင်မြင်မြင်ကျင်းပ နိုင်ခဲ့တယ်။ ဘဘကြီးတို့ ခေတ်ပြိုင်စာရေးဆရာတွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို လဲစုပေါင်း ပြီး ပြပွဲတစ်ခုအဖြစ် ကျင်းပဖြစ်ခဲ့တာဟာလဲ ဘဘကြီးမေမေကြီးတို့ကပေးတဲ့ မေတ္တာတရားကိုြ့ပသခြင်းပဲလို့ ခံစားနေမိပါတယ်။
ကြွရောက်လာသူ အပေါင်းကို ဘဘကြီးက ထမနဲပွဲမှာ ထမနဲ လက်ဆောင်ပေးသလို A Memory of My Grandparents စာအုပ်လက်ဆောင်ပေးဖြစ် ခဲ့တယ်။ အခုထိလဲ စာအုပ် မရသေးတဲ့ ဘဘကြီးမေမေကြီးတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေဟောင်းတွေဆီ ပို့ပေး နေရဆဲပါပဲ။ ဘဘကြီးကျေနပ်နေလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ ဘဘကြီးမေမေကြီးတို့ရဲ့ အမှတ်တရလက်ဆောင်လို့ သဘောထားပြီး ပေးဖြစ်နေတာကြောင့် ပိုပြီး ကျေနပ်အားရမိပါရဲ့။
သည်စာအုပ်ကုို အင်္ဂလိပ်လုို ရေးဖြစ်ခဲ့တာဟာ ဘဘကြီးမေမေကြီးတုို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအမွေကြောင့်ပါပဲ ဆုိုတာကုို ဟောသည် ခပ်တုံးတုံးမြေးက မဏ္ဏပ်တုိုင်တက် ပြလုိုခြင်း၊ အင်္ဂလိပ်လုိုရေးရတဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းအရသာကုို ခံစားမိခြင်း၊ တွေကြောင့်ရယ် ဆုိုပါတော့။ သုို့သော်လဲ အင်္ဂလိပ်လုို စာအုပ်ကုို မြန်မာလုိုမဟုတ်လုို့ မြန်မာပြည်က စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြားမှာ အားပေးခံရပုံ တမျိူးတော့ဖြစ်သွားတယ်။ သည်စာအုပ် မြန်မာလုို မရှိဘူးလား။ မြန်မာလုို ထွက်ရင် ပြောပါ၊ အဲသည်တော့မှပဲ ၀ယ်မယ်။ မြန်မာလုို မှတ်လုို့ လာဝယ်တာ ဆုိုတဲ့ ပရိသတ်ကုို တွေ့လုိုက်ရတယ်။ မြန်မာလုိုအေးအေးဆေးဆေး နေတော့မှပြန်မယ်လို့စိတ်ကူး၊ ပြန်ချင်မှလဲ ပြန်ဖြစ်မယ်။ အင်း… ပြန်တော့ပြန်မယ်ပေါ့… သုို့သော် အခုတော့ အင်္ဂလိပ်လုိုပဲ ပေးမယ် လုို့ စိတ်ကူးက မြန်မာလုို ပြန်တော့လုို့ တွန်းအားတစ်ခု ရလုိုက်သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ ဘဘကြီးရေ။
ဘဘကြီးလဲ Everyday Expressions in English ကုိုပထမအကြိမ် ထုတ်တုန်းက မြန်မာလုို တောင်းဆုိုကြလို့ မြန်မာ ဘာသာပြန်ကုို နောက်ပုိုင်းတော့ မြန်မာလုို ကီးဝေ့ါတွေနဲ့ ပဲထုတ်ဖြစ်ခဲ့သွား တာကုို သတိရမိတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘဘကြီးရဲ့ Current Essay ကိုလည်း စာဖတ်သူများရဲ့ တောင်းဆုိုမူကြောင့် မီးနင်းတွေကုိုနောက်ပုိုင်း မြန်မာလုို ထည့်ပေးခဲ့ရတယ်။ သည်တော့ အခုလည်း အဖြစ်က ဘဘကြီးဖြစ်ပုံနဲ့ များ တူနေသလားလုို့…. ။ ကို်ယ်ကြိုက်တာပဲကိုယ်ရေးမယ် ဆုိုတဲ့ အချက်ကုို လက်ကိုင်ထားတဲ့ သည်မြေးအတွက် တခါတလေ စာဖတ်သူတွေ ကိုလုိုက်လျောရမှာလား ဆုိုတဲ့ အချက်ကုို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရတဲ့အခါ ဘဘကြီး အဖြစ်တွေကုို ပြန်အောက်မေ့မိတယ်။ ဒါဟာ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထုိုက်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်တယ်လုို့ လက်ခံမိပါတယ်။
ဘဘကြီးတုို့ နှစ်တစ်ရာပြည့်ကုို ကျင်းပဖြစ်ခဲ့တဲ့ မေလဆိုတဲ့ကာလဟာ နေကပူပူ ကားကကြပ်ကြပ်နဲ့ သည်လိုဒုက္ခတွေကြားထဲကနေ ဘဘကြီးမေမေကြီး နှစ်တရာပြည့်ကို ကြွလာကြသူအပေါင်းကိုလဲ အားနာနာနဲ့ ကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်။ ကားကကြပ်တော့ သည်နား ဟိုနားတောင် နာရီနဲ့ချီပြီးကြာနေကြတာကိုး။
ဘဘကြီးရေ… ကုိုယ်ပိုင်ကားမရှိပေမယ့်လဲ အလွယ်တကူ တက်စီငှားလုို့ရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ အခုတော့သည် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကားတွေက ပေါလာလုိုက်တာ လုို့ ကြားရင်ဒါကို ဘဘကြီးက ကံကောင်းလိုက်တာလို့ ပြောဦးမှာလား။ ဟောဒီ ကမ္ဘာလောကကြီးမှာ…. ဘဘကြီးတုို့ ရှိနေတုန်းကထက် လုံးဝမတူခြားနားနေတဲ့ သည်ခေတ်သည်အခါမှာဖြင့် ဘဘကြီးရေ…. ဖြစ်သမျှ အကြောင်း မကောင်းလေတော၊့ ”ဖြစ်သမျှ အကြောင်းအကောင်းပါပဲ” ‘Blessing in disguise’ ဆုိုတဲ့ ဘဘကြီးရဲ့ ဆုံးမစကားလဲ မကယ်နုိုင်၊ ကားတွေကြပ် လမ်းတွေပိတ်တာကို မကြုံဖူး မမြင်ဖူးလိုက်တဲ့ ဘဘကြီးကို၊ ခေတ်မှီတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုင်ရပေမယ့် စိတ်တပူပူနဲ့ စိုးရိမ်နေတဲ့စိတ်တွေနဲ့ အလုပ်တွေသိပ်များနေရတဲ့ သည်မြေးက၊ မုိုးကောင်းကင်အောက်…. လပြည့်ညတစ်ညမှာ ပျောက်နေတဲ့ လကုို လုိုက်ရှာရင်းနဲ့…..ဘဘကြီးနှစ်တစ်ရာပြည့် စကားတစ်ခွန်း လက်ဆောင်ပါးချင်ပါတယ်…. ဘဘကြီးတို့က မြေးတို့တွေထက် ပိုကံကောင်းပါတယ်… ဆုိုတဲ့စကား ကြားရင် ဘဘကြီး ဘယ်လုိုများ ပြန်ပြောလေမလဲ။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ဂျုနီယာဝင်း, လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ